Nadaxweynaha Koonfur galbeed oo maanta gaaray Qansax-Dheere – Radio Muqdisho
Booqashada maanta uu degmada Qansaxdheer ee gobolka Baay uu ku tagay Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxaa ku wehliyay xubno ka tirsan Wasiirada Maamulka Koonfur galbeed , Guddoomiyaha gobolka Baay iyo saraakiil kale.
Wefdiga Madaxweynaha markii ay gaareen degmada Qansaxdheer ayaa waxaa si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyay maamulka iyo boqolaal kamid ah dadka ku dhaqan degmadaasi, waxaana u jeedada socdaalka Madaxweynaha Koonfur galbeed lagu sheegay u kuur galidda xaaladda nolaleed ee dadka deegaanka maadaama degmada Qansaxdheere ay Maleeshiyaadka UGUS ay go’doomiyeen.
Wasiirka Arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur galbeed Mudane C/raxmaan Aadan Sate oo kamid ah xubnaha Wasiirada ee maanta gaaray Qansaxdheere ayaa sheegay in Madaxweynaha Koonfur galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh uu u balan qaaday dadka ku nool degmada Qansaxdheere dhowaan loo furi doono dhamaan wadooyinka soo gala degmadaasi.
Degmada Qansax dheere oo dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa labo sano ka hor laga saaray Maleeshiyaadka nabad diidka ah ee UGUS, waxaana hadda gacanta ku haya ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Waa booqashadii ugu horeysay oo Madaxweynaha Koonfur galbeed uu ku tago degmada Qansax dheere tan iyo markii loo doortay Madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kale booqasho taa lamid ah ayaa shalay waxaa wefdi uu hogaaminaayo Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan ay ku tageen degmada Waajid ee gobolka Bakool, halkaas oo ay ka jirto xaalad bani’aadminimo oo ka dhalatay go’doominta kooxda UGUS ay ku sameysay dadka ku dhaqan Waajid.
Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa la kulmay bulshada Waajid iyo maamulkooda isagoo sheegay in dhowaan la furi doono dhamaan Jidadka soo gala degmada Waajid ee gobolka Bakool.
Wasiirka Warfaafinta oo la kulmay qaar kamid ah maamuliyaasha Warbaahinta dalka"SAWIRRO"